Sergio Agüero oo shaaca ka qaaday go’aankii ugu fiicnaa ee abid uu qaatay xirfadiisa kubadda cagta – Gool FM
(Manchester) 31 Okt 2019. Weeraryahanka reer Argantina iyo kooxda Manchester City ee Sergio Agüero ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in go’aankii uu ugu biiray sky blue uu yahay mid ka mid ah go’aamada ugu muhiimsan ee noloshiisa.
31 jirrakan reer Argantina ayaa yimid kooxda Manchester City xilli ciyaareedkii 2011, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay naadiga Atletico Madrid qiimo dhan 40 million euros.
Sergio Agüero ayaa noqday mid ka mid ah xiddigihii ugu fiicnaa ee Manchester City xilli ciyaareedyadii la soo dhaafay, wuxuu dhaliyay 172 gool, isagoo sidoo kale caawiyay 52 gool, 248 kulan uu u saftay sky blue.
Agüero ayaa kula guuleystay kooxda Manchester City afar jeer horyalka Premier League, koobka FA Cup hal jeer, Carabao Cup afar jeer, iyo FA Community Shield oo seddex jeer ah.
Weeraryahanka reer Argantina ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Manchester City wuxuu shaaca kaga qaaday:
“Waxaan ku dareemayaa Manchester City sida gurigeyga oo kale, markii aan imid waxaan dareemay inaan ka tirsanahay kooxda, taasoo ii fududeysay inaan la qabsado”.
“Waan jeclaaa kooxdan sanadihii ugu dambeeyay, magaalada Manchester waxay neefsaneysaa kubadda cagta, in kasta oo ay jirto tartan maxalli ah, xiriirka aan la leenahay deriskeena mar walba waa mid saaxiibtinimo”.
“Way igu adkeyd inaan iska dhaadhiciyo la joogista hal koox waqtigaan oo dhan, laakiin markii uu waqtiga sii socday, waxaa ii cadaatay runtii inay tani tahay waxa aan doonayay, haddana waxaan ku raaxeysanayaa xilli ciyaareedkeygii sagaalaad ee kooxda Manchester City”.
“Waxaan dareemayay deganaansho tan iyo maalintii ugu horreeysay ee aan halkan imid, wuxuuna dareenkaas noqday mid sii xoogeeystay waqti kaddib, waxaanan u malaynayaa in go’aanka aan ugu dhaqaaqay Manchester City uu ahaa go’aankii ugu fiicnaa ee aan abid qaatay”.